Zimbabwe is very special to us as it’s where African Impact was founded in 2004. Whist Zimbabwe has been the scene of political unrest in the past, the current climate is calm and Zimbabwe’s tourism industry welcomes hundreds of thousands of visitors each year.
The local people, mostly from the Shona and Ndebele tribes, are among the warmest and friendliest people you’ll ever meet – full of smiles and greetings.
Zimbabwe is a playground for much of Africa's abundant wildlife and with acacia trees dotting the landscape it evokes the feeling of a deep and true Africa. Zimbabwe is also home to the glorious Victoria Falls, known to the locals as Mosi-ao-Tunya ‘smoke that thunders'.
The area is a paradise not only for adventurers but many mammals and birds inhabit Victoria Falls National Park and Zimbabwe’s other seven national parks.